I-El Salvador yamkela i-Bitcoin njengemali yayo esemthethweni, i-Bitcoin yengozi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba ezise-El Salvador » I-El Salvador yamkela i-Bitcoin njengemali yayo esemthethweni, i-Bitcoin yengozi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba ezise-El Salvador • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Urhulumente wase-El Salvador wanyanzelwa ukuba athathe isipaji esitsha sedijithali i-Chivo ngaphandle kweintanethi ngelixa wayephethwe ngumkhuhlane ukukhulisa amandla eserver.
Ukwamkelwa ngokusemthethweni kwe-crypto esemthethweni kwihlabathi kuqala kwindawo enamatye.
Urhulumente wase-El Salvador uthathe i-wallet yedijithali yelizwe ngaphandle kweintanethi ukukhulisa amandla eserver.
I-Bitcoin plummets emva kwe-El Salvador yamkele ngokusemthethweni njengemali esemthethweni.
Ixabiso le-asethi yedijithali yenombolo yokuqala yedijithali, i-bitcoin, yehle kangange-16% ukuya kuthi ga kwi-43,100 yeedola emva kokophula i-52,000 yeedola ngasekupheleni koMvulo.
Umongameli wase-El Salvador uNayib Bukele
U-Bitcoin ungene emva korhulumente wase-El Salvador wamkela ngokusemthethweni njengemali yelizwe esemthethweni. Ukwamkelwa ngokusemthethweni kwe-crypto esemthethweni emhlabeni kwakudityaniswe noqhanqalazo ezitalatweni kunye nokubulawa kobuchwephesha kwi-Intanethi.
Bitcoin Ingozi ibangelwe yingxaki yezobuchwephesha eyanyanzela urhulumente wase-El Salvador ukuba athathe isipaji esitsha selizwe ledijithali i-Chivo ngaphandle kweintanethi ngelixa bekhathazwa ngumkhuhlane ukukhulisa amandla eserver.
Siyiqhawule kunxibelelwano ngelixa sandisa amandla eeseva zokubamba imifanekiso. Iingxaki zokufakwa kwabanye abantu zazingesosizathu, ”utshilo uMongameli uNayib Bukele kuTwitter, esenza intetho malunga nokubuyela umva.
I-cryptocurrency ikwazile ukubuyela umva ukusukela ngoko, kwaye yagqitywa phantsi kwe-13% ukuthengisa nge- $ 45,512.
Ngeli xesha, iqela labaqhankqalazi elihlanganisana ngokuchasene nomthetho omtsha we-bitcoin langena kwizitalato zedolophu elikomkhulu iSan Salvador. Amatsha ntliziyo axelwa ukuba ayematsha ngokuchasene neli nyathelo ngenxa yokunqongophala kolwazi malunga nemali yedijithali kunye nendlela oza kusetyenziswa ngayo umthetho omtsha we-bitcoin.
El Salvado Yothusa i-crypto kunye nehlabathi elibanzi ebutsheni balo nyaka emva kokuba uMongameli uBukele ebhengeze izicwangciso zokwamkela i-bitcoin njengethenda esemthethweni ecaleni kwedola yaseMelika, ebisetyenziswa kwilizwe ukusukela ngo-2001.